(ဂ)-ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ တာမိုးညဲဒေ သနေပြည်သူ့တချို့အားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် တရားဝင် အတည်ပြုပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင် ငံတော်အစိုးရက မည်ကဲ့သို့မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများဖြင့် သတ်မှတ်ပေးနေသည်ကို သိ လိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (ဂ)-ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ တာမိုးညဲဒေ သနေပြည်သူ့တချို့အားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် တရားဝင် အတည်ပြုပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင် ငံတော်အစိုးရက မည်ကဲ့သို့မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများဖြင့် သတ်မှတ်ပေးနေသည်ကို သိ လိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
လုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်က ၁၁.၃.၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၂/ဒ၃-၁၀၀၄၁/ကပန နဲ့ပေးပို့ခဲ့သည့်တာမိုးညဲဒေသ၊ မုန်းဝန်းတိုင်းရင်း သားများအား မ
(င)-ပြည်တွင်းအိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများနှင့် ပြည်ပရောက်အိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများ၏အ ခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပေးရေးနှင့်ကုစားပေးရေး အစီအစဉ်များ ရေဆွဲထားခြင်းရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
Read more about (င)-ပြည်တွင်းအိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများနှင့် ပြည်ပရောက်အိမ်အကူအမျိုးသမီးလုပ်သားများ၏အ ခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ပေးရေးနှင့်ကုစားပေးရေး အစီအစဉ်များ ရေဆွဲထားခြင်းရှိ/မရှိ သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့ကြီးမြို့ငယ်များတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များအရအိမ်အကူများ၊ တခြားပြည်နေရသည့်အိမ်ထောင်စုများရှိပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးငွေရေးကြေးရေးချမ်းသာ၍ အိမ်အကူထားရတာရှိသလိုအိမ်ရှင်မတွေမအားမလပ် မနိုင်မနင်း၍ အိမ်အကူထားရသည် များလည်းရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းအိမ်အကူမိန်းကလေးများသည် ဆင်းရဲသည့် မိသားစုများမှ ပေါက်ဖွားလာကြသည့်သူမျာ
(ခ)-နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား stay permit ကို ပထမအကြိမ် လျှောက်ထားပါက (၃)လ၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၆)လနှင့် တတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၁)နှစ်ပေးရမည့် အစားတစ်ခါလျှောက်လျှင်(၁)နှစ်သို့ပြောင်းလဲပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်း
Read more about (ခ)-နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား stay permit ကို ပထမအကြိမ် လျှောက်ထားပါက (၃)လ၊ ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၆)လနှင့် တတိယအကြိမ်လျှောက်ထားပါက(၁)နှစ်ပေးရမည့် အစားတစ်ခါလျှောက်လျှင်(၁)နှစ်သို့ပြောင်းလဲပေး ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပါတီမူဝါဒမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖိတ်ခေါ်ရန်ဖြစ်ပါ
Read more about (က)-မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေခြင်း လုံးဝပပျောက်စေရန် အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေး အမျိုးသားအဆင့် တိုင်ကြားရေးယန္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို သိလိုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (ခ)-၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေ၊ အိမ်နှင့်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစာရင်း(၁၃၅)မျိုးတွင် မပါဝင်သော ကုဒ်နံပါတ် (၉၁၄)(အခြား)ခေါင်းစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်များကို ဖော်ပြပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (က)- ကျူးကျော်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော နိုင်ငံသားမိသားစုများအား အိမ်ထောင်စုစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် မရှိပါက အိမ်ထောင်စုစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်ရေး မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (ဂ)-ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တွင် မြေလွတ်၊ မြေလပ်များရှိနေသော်လည်း အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရုံး မရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရပါသဖြင့် ရုံးတစ်ရုံးအမြန်ဆုံးချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(က)-ကလေးသူငယ်များ အလုပ်ခိုင်းစေမှု အငယ်ဆုံးအသက်ဆိုင်ရာ ILO Convention No.(138)ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (က)-ကလေးသူငယ်များ အလုပ်ခိုင်းစေမှု အငယ်ဆုံးအသက်ဆိုင်ရာ ILO Convention No.(138)ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(က)ကလေးသူငယ်များ အလုပ်ခိုင်းစေမှု အငယ်ဆုံးအသက်ဆိုင်ရာ ILO Convention No.(138)ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်များ ထပ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးစေရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးမည် ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Read more about (ခ)-မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်များ ထပ်နေသည့်အတွက် နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးစေရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးမည် ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မိုးကုတ်မြို့နယ်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပါဝင်သော်လည်း သီးခြားတည်ရှိသည့် တောင်ပေါ် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားတွေ အသစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် စီမံချက်ချပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် မိမိတို့မြို့နယ်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်နံပါတ်များ တူညီတာစွာ ထုတ်ပေးခဲ့သည်ရှိကြောင်းကို ‌သိရှိခဲ့ရပါကြောင်း၊ စိစစ်ရေး
Subscribe to အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန